SingtechG9 (3G) Dual Sim - ရွှေရောင် (ငါးသောင်းတန်နံပါတ်အလှOoredooဆင်းမ်ကဒ်လက်ဆောင်) | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Singtech G9 (3G) Dual Sim - ရွှေရောင် (ငါးသောင်းတန်နံပါတ်အလှOoredooဆင်းမ်ကဒ်လက်ဆောင်)
CPU: Up to 460 MHz single-core (SC7701)
Network: 2G bands (900 / 1800), 3G bands (900 / 2100)
Dual SIM (SIM1 (Mini SIM) & SIM2 (Mini SIM))
Singtech ဆိုင်သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်
ရောင်းချသူ Ooredoo Myanmar
17 နှုန်းအား အခြေခံ၍
2017 ဇူလိုငျ 2
လိုင်းဆွဲအား အခြေအနေသိချင်ပါတယ်..ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာ လိုင်းသိပ်မမိလို့ပါ..ဆွဲအားကောင်းရင်လိုချင်ပါတယ်ဗျာ..ဒီမှာဝယ်တာ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖြစ်နေလို့ပါ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 ဇှနျ 7
Singtech G9 (3G) Dual Sim – Gold (Free Ooredoo Sim Card with Beautiful Number worths 50,000ks)အသံက ကြည်နေတာပဲ ဖုန်းပြောရင် လိုင်းဆွဲအားလဲကောင်းတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 မေ 25
ဖုန်းလိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ် ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်သုံးလို့မရဘူး ဖုန်းပြောဖို့လောက်ပဲအဆင်ပြေတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
it is good connectivity. It has 128MB internal storage and therefore music and other data files can be saved conveniently. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 မတျ 13
Key pad phone ပဲသုံးတယ် အကြမ်းခံတယ်လေ။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 စကျတငျဘာ 26
အူရီဒူးနံပါတ် သိချင်ပါတယ် နံပါတ်ပါရေးပေးပါလား
နံပါတ်သိချင်ပါတဟ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Display 2.4 inches ရှိသော singtech G9 ဖုန်းသည် မျက်နှာပြင်ငယ်ဖုန်းများတွင်သင့်တင့်မျှတသော တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ 2G, 3G ကွန်ရက်များတွင် လိုင်းအားကောင်းသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ SD card ကို 32 GB အထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် Data များကိုလည်း လုံလောက်စွာ သိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါ။ 1000mAh ဘက်ထရီပါရှိသဖြင့် အားတစ်ခါသွင်းထားရုံဖြင့် ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းပြီး အကြမ်းခံသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်၍ လူကြီးများနှင့်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။
Camera: VGA (Rear)
Memory: 128MB ( Micro SD Support )
Connectivity: Bluetooth Support
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် G9 (3G) Dual Sim - ရွှေရောင် (ငါးသောင်းတန်နံပါတ်အလှOoredooဆင်းမ်ကဒ်လက်ဆောင်)